फेसबुक ‘वाच’ युट्युबसँग जुध्दै ! – कामना डेली
फेसबुक ‘वाच’ युट्युबसँग जुध्दै !
प्रकाशित मिति २०७५ आश्विन २६, शुक्रबार ११:२६
असोज २६ / सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले केही समयअघि मात्रै आफ्नो एपमा नयाँ फिचरको सुरुआत गर्‍यो। कम्पनीले ‘फेसबुक वाच’ को रूपमा सुरु गरेको नयाँ फिचरले छोटो समयमै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रियता हासिल गरेको छ। सामाजिक सञ्चालमै भिडियो प्याल्टफर्म उपलब्ध गराएसँग भिडियो प्याल्टफर्मको रूपमा चिनिएको युट्यबलाई अब चुनौती थपिएको छ।
फेसबुकको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्न हो भने ४० प्रतिशत फेसबुकका प्रयोगकर्ता साप्ताहिक रूपमा भिडियो वाच प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। तथ्यांकका आधारमा जसले प्रतिदिन दुईदेखि तीन घन्टा फेसबुक प्रयोग गर्छन्, उनीहरूले साप्ताहिक रूपमा एक पटक भए पनि फेसबुक वाच हेर्ने गरेका छन्। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, फेसबुक वाच दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्तामध्ये ४० प्रतिशत १६ देखि ३४ वर्ष उमेरका रहेका छन्। फेसबुकले सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांकले युट्युबलाई ठूलो झड्का लागेको छ। किनभने पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने युट्युबको मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ता एक अर्ब ९० करोड रहेको छ।
उता फेसबुकमा भने दुई अर्ब एक करोड रहेका छन्। प्रयोगकर्ताको हिसाबले सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको फेसबुकले भिडियो प्याल्टफर्म सार्वजनिक गरेसँगै युट्युबलाई अब फेसबुकको भिडियो वाचसँग भिड्नुपर्ने भएको छ। सुरुको चरणमा प्रयोगकर्ताले विकल्पको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिरहेको भए पनि अबको केही समयमा यसले युट्युबलाई नै समस्यामा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले उल्लेख गरेको छन्।
फेसबुकले दिएको नयाँ सेवा अर्थात भिडियो स्ट्रिमिङ ‘फेसबुक वाच’ मार्फत प्रयोगकर्ताले आफूलाई मनपर्ने चर्चित ब्रान्डदेखि खेलाडीसम्मका सो छनोट गरी हेर्न सक्नेछन्। साथै फसेबुकको न्युज फिडमा आएको भिडियालाई सेभ गरी त्यसमा हेर्न सकिने सुविधासमेत कम्पनीले उपलब्ध गराएको छ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, प्रयोगकर्ताले युट्युबमा जस्तै फेसबुक वाचमार्फ आम्दानी गर्न सक्नेछन्। कम्पनीका अनुसार प्रयोगकर्ताले अपलोड गरेको भिडियोमा देखाइने विज्ञापनबाट आउने पैसा प्रयोगकर्ता र फेसबुकलाई बाँडिनेछ। जसमा निर्मातालाई ५५ प्रतिशत र फेसबुकलाई ४५ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ।
फेसबुक वाचलाई प्रयोगकर्ता मैत्री र आकर्षण बनाउन फेसबुकले विशेष कार्यक्रमसमेत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। जसमा ठूला कलाकारदेखि विश्वमा परिचित सेलिब्रेटीको उपस्थिति हुने जनाइएको छ। त्यसमध्ये टक सो ‘रेड टेबल टक’ उत्पादनमा काम गरिरहेका जेडा पिंकेट स्मिथ र ‘सरी फर योर लस’ की एलिजावेथ ओल्सेन देखा पर्नेछिन्। त्यस्तै फेसबुक वाचमै बेलायती साहसिक यात्री बेयर ग्रिल्सको ‘फेस त वाइल्ट’ नामक रियालिटी सो पनि आउने जनाइएको छ। त्यस्तै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले पनि आफ्नो सोको तयारी गरिरहेको फेसबुकले जनाएको छ।
कम्पनीले नयाँ सर्भिस सुरु गरेसँगै त्यसका लागि आवश्यक केही नियम पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। युट्युबमा जस्तै आम्दानी गर्न सकिने भएकाले कम्पनीले युट्युबमा जस्तै केही नियम राखेको हो। जसमा भिडियो कम्तीमा पनि तीन मिनेटभन्दा लामो हुनुपर्ने, उक्त भिडियो दुई महिना भित्रमा कम्तीमा ३० हजार मानिसले एक मिनेट हेरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै १० हजारभन्दा धेरै फलोअर्स हुनुपर्ने। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यसको कार्यालय एड ब्रेकवाला सुविधा उपलब्ध भएको देशमा हुनुपर्नेछ। तर, अहिलेसम्म नेपालमा भने यो सुविधा उपलब्ध भएको छैन।
सोलुखुमबुमा सिसी बोतल प्रवेशमा प्रतिबन्ध,